श्रीमतीका थिए १४ प्रेमी, श्रीमानले सबैसँग मागे १०० करोड क्ष’तीपूर्ती « गोर्खाली खबर डटकम
सार्बजनिक भयो आलिया र रणवीरको बिबाहको मिती, आलियाले प्रसिद्ध डिजाइनर संग बनाउन दिइन यस्तो लेहंगा
औषधीको गुणले भरिपुर्ण हुन्छ काजु !
यस्ता संकेत देखिए हुनसक्छ डिप्रेसन, यस्ता छन् थाहा नै नपाई देखिने लक्षण !
कपालमा तेल लगाउनु हुन्छ ? कपालमा नियमित तेल लगाउँदाका यति धेरै फाइदा यस्ता छन् जानिराखाैँ
श्रीमतीका थिए १४ प्रेमी, श्रीमानले सबैसँग मागे १०० करोड क्ष’तीपूर्ती
२०७७ भाद्र १२ गते शुक्रवार प्रकाशित
काठमाडौं। श्रीमतीको १४ जनासँग अ’वैध सम्बन्ध भएको थाहा पाएपछि श्रीमानले प्रत्येक प्रेमीलाई कानुनी नोटिस पठाएर कूल १ सय करोड भारु (१ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको मानहा’नीको दावी गरेका छन् । यो घट’ना कोलकाताको हो ।
पेशाले व्यापारी श्रीमानले यी पुरुषहरुका कारण आफ्नो वैवाहिक जीवन तह’स नह’स भएको र समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा धुमिल भएको दावी गरेका छन् ।
भारतीय अखबार दैनिक जागरणका अनुसार ती व्यवसायीले आफ्ना गाडी चालकलाई जा’सुस बनाएर यो जानकारीका साथमा अ’वैध सम्बन्धका प्रमाणहरु समेत जुटाइसकेका छन् । उनले ती सबै १४ जनालाई छुट्टछुट्टै कानुनी नोटिस पठाएका छन् जसमा भनिएको छ – नोटिस पाएको दुई हप्ताभित्र मा’नहानीको क्ष’तिपूर्तिवापत उल्लिखित रकम नदिए कानुनअनुसार का’रवाही गरिनेछ ।
नोटिसमा उनले लेखेका छन् ‘हालै मलाई थाहा भएको छ कि तपाइँको मेरी पत्नीसँग शा’रीरिक सम्बन्ध छ र गो’पनीय रुपमा मेरी श्रीमतीसँग सम्प’र्कमा हुनुहुन्छ ।’
उनले अगाडि लेखेका छन् ‘तपाइँहरु सबैलाई थाहा छ कि उनी विवाहित हुन् । तपाइँहरुमध्ये धेरैले मलाई उनका पतिको रुपमा पनि चिन्नुहुन्छ । तपाइँहरुको यो अवै’ध क्रियाकलापले मेरो वैवाहिक जीवन तह’सनहस भएको छ । म समस्यामा बाँचिरहेको छु । समाजमा मेरो प्रतिष्ठा पनि न’ष्ट भएको छ ।
मानहा’नीको क्ष’तिपूर्तिको रुपमा तपाइँहरु सबैले मलाई २ हप्ताभित्र १०० करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । यस्तो नगरेमा तपाइँहरुवि’रुद्ध कानुनसम्मत तरिकाले कदम उठाइनेछ ।’
पन्जसिरमा बाल लडाकु जो तालिबानविरुद्धको युद्धमा होमिएका छन् !
काठमाडौँबासीहरुका लागि आयो यस्तो खुसीको खबर, सबैले अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने
बिहेको अघिल्लो दिन अर्कै संग पोइला ! प्रेमिकाले लेखि दुनिया रूहाउने कथा !